people Nepal » के सेक्स मेसिनले आत्मियता प्रतिस्थापन गर्ला ? के सेक्स मेसिनले आत्मियता प्रतिस्थापन गर्ला ? – people Nepal
Posted on April 24, 2017 by Tara Nidhi
एजेन्सी, ११ वैशाख । चौथो औद्योगिक क्रान्तिपछि भएको प्रविधिको विकासले समाजमा मान्छेलाई कसरी सजिलो उपाय अपनाउने भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । जसका कारण बच्चाहरू सुत्नका लागि पनि मेसिनको उपयोग गर्न थाले । मेसिनको सहयोगले अन्य धेरै काममा मानिसहरू अभ्यस्त भएका छन् । र, मानव जीवनको प्रमूख पाटो ‘सम्भोग’का लागि पनि मेसिनको प्रयोग भएको छ ।
सेक्सका लागि बन्ने मेसिनको विरुद्धमा लागेकी मोनफोर्ट युनिभर्सिटीकी संस्थापक क्याथलिन रिचार्डसनले ‘सेक्स मेसिनको विकास मानव सम्बन्धको व्यापारीकरण हो’ भनेकी छन् । ‘सेक्सका लागि गरिने यस्तो सेवामा त्यति आत्तिनुपर्ने केही देखिँदैन’, नर्वेको डिजिटल मिडियासम्बन्धि सल्लाहकार चाल्र्स मेल्भिनले भनेका छन्,‘हामीले प्रेम गरेको मान्छेसँग सम्भोग गरेको अनुभुति गर्न यसले सम्भव गराउँछ ।’ चाल्र्स ठान्दैनन् कि सेक्स रोबोटले मानव मानवको सम्बन्ध र चाहनामा ह्रास गराउँछ । ‘मैले लामो समयसम्म कल्पना गरें कि जसले यो मेसिनको प्रयोग गर्छ उनीहरू असक्षम हुन्छन्, यसलाई विर्सौं । हुनसक्छ जसले यसलाई मात्र मेसिन भने वा यसको उपयोग काम नलाग्ने भने, तिनिहरूले धेरै रक्सी पिएको हुनुपर्छ ।’, उनले भनेका छन् । चाल्र्सले जे भनेपनि मेसिनसँगको सम्बन्ध भएपछि मानवीय बास्तविक सम्बन्धमा खुल्नुपर्ने बानीमा भने ह्रास आउनेछ ।